VirBELA: Virtual Conferencing mu3-Mativi | Martech Zone
Kusangana kure kwave kungoita wega pachikuva chakadaidzwa VirBELA. Kusiyana nemavhidhiyo musangano weapplication seFacetime, Zoom, Messenger, Microsoft Teams, Google Sangana, iyi yakatosiyana.
VirBELA inokuisa mumutambo-senge 3-D kambasi nharaunda kwaunosangana nekufamba famba uchitaurirana, uchikurukura nenzira imwecheteyo yaungaita dai maive pamwe mune zvepanyama kwete pasirese pasirese. Kusiyana nenzvimbo dzemitambo yekunakidzwa kana Hwechipiri Hupenyu, iyo yepasirose nyika yakapihwa naVirBELA ibhizimusi-nyanzvi. Iyo inopa yakakwira-kumagumo yemakambani kambasi ine mahofisi, dzimba dzebhodhi, dzimba dzemusangano, horo, uye kunyangwe iri inopararira yemazuva ano nzvimbo yekuratidzira yakagadzirirwa neicho chaicho chekushambadzira matumba.
Iyi 3-D yekuunganidza nzvimbo yakatanga kuvakwa nekambani yezvivakwa eXp Realty senzira yekuwana mukana wekukwikwidza pane vanokwikwidza. Sezvo mamwe makambani edzimba achiramba akasungirirwa nezvivakwa zvemutengo zvinodhura kupa vashandi nevamiriri nzvimbo yekushandira pamwe, eXp yakachengetedza hupfumi nekubvisa kudiwa kwemidziyo yekutengesa, nguva yekufamba, kurwa kwemigwagwa, uye mamwe akawanda masitina nematope.
VirBELA yaive yechokwadi tekinoroji yekuvhiringidza kune indasitiri inozivikanwa nekukanganisa kwetekinoroji. Ichishanda isina zvivakwa chaiko, eXp Realty yakakura kubva pakuva kutanga kusvika pakuve nevanopfuura makumi maviri neshanu vamiririri. Kune iyo yakawanda chikamu, vashandi vayo, CEO, nevamiriri vanokwanisa kushanda kubva pakunakira imba.
Mari yekubhadharwa nemabhizimusi edzimba inogona kubhadharwa nemitengo yakatarwa uye inoshanduka yekuita bhizinesi. Kupa simba kune wese munhu kuti aite basa ravo mukati memubatanidzwa wekambasi nharaunda pasina kubva pamba kwete kungodzora pamusoro mari yekuwedzera mari yemumiririri, zvakaita kuti kudzidziswa uye kubatana kwetimu kuve nani uye nekukurumidza. Ivo vanodzidziswa nekukurumidza uye vanove nekuwana kwechokwadi kwekukurumidza kuwana kune vanotsigira vashandi.
Kunyangwe paine musangano wevhidhiyo, kubatana kwekure kure kunogona kutaridzika sekuzviparadzanisa nevamwe. VirBELA's 3-D nharaunda inobatsira kutiza kusarudzika munharaunda, ichiita kuti inzwe senge kuve pamwe chete mukamuri imwechete, uye haidi VR yemusoro. Uchishandisa miseve pane yako keyboard iwe unofamba kufamba-famba, kusangana nevanhu, kukwazisa maoko, kutaurirana, kutenderera musasa pamwe chete, uye kunyange kupaza kumwe kutamba kwekutamba.
Pakati pechitarisiko chakakwenenzverwa, chinangwa chinonyanya kukosha ndechimwe chekuita kuburikidza nekuvandudza kutaurirana Dzimba dzemusangano, dzimba dzemakamuri, dzimba dzekudzidzira, nemahofisi zvese zvine zvihombe zvihombe pamadziro zvekugovana zvirimo mukirodhi rako, chero mawebhusaiti, misangano yevhidhiyo, kana mamwe maapplication eboka. Izvo zvaunosangana nazvo matanho akati wandei padhuze nekusangana takatarisana.
Mune zvakawanda nzira yaunoita mune chaiko pasirese, vanhu vari muVirBELA vanokwanisa kuvaka hukama kuburikidza nemhando dzekusagadzikana kwenzvimbo kwaungave uine muhofisi yemubatanidzwa kana kutenderera nepakati pekokorodzano. Zvakaita sekunge wakamira padivi pevamwe, unosangana mumapoka. Se avatar ine ruzha rwemuchadenga unogona kugara patafura yemusangano uchiteerera munhu ari kurudyi kwako nzeve yako yekurudyi, kuruboshwe munzeve yako yekuruboshwe ne3-D odhiyo. Unotenderedza musoro wako kuti utarise-tarise mumba, uchitaurirana nemumwe nenzira yaungaita dai iwe waizotengesa mumafraer mamaira kuti muve pamwechete.
Mushure mekuraira a VirBELA Chikwata Suite zvebhizinesi rangu, Douglas Karr aive mumwe wevanhu vekutanga vakauya kuzofunga kuisuma. Sezvo ini naDoug tiri vaviri vatengesi vedigital kuGreenwood isu tinotaura mutauro mumwechete wechizvarwa chinotungamira, uye ndinoziva iye, zvakare, anobata nedhijitari manejimendi manejimendi anosanganisira vatengi vekunze uye zvikwata zvakapararira munzvimbo. Kugovana Screen uye webcams zvine nzvimbo yavo munzira dzekutaurirana, kunyangwe dzimwe nguva tichidzivisa kufumura kumeso kwedu kune kamera. Uine kana isina kamera, izvi zvinokugonesa kutevedzera kuvapo kwenzanga kwekuve mune imwechete kamuri pamwechete.
Paunenge uchida vhidhiyo kuwedzera mazwi ako nechiso chechiso, VirBELA inozviita. Iwe unogona kutaura kuti zvakawanda zvezvinogona kuitwa Zoom, VirBELA inoita, futi. Ruzivo rwekupinda mukamuri uye kutaura nevamwe vanhu mune iyo kamuri ndechimwe chezvinhu zvakasarudzika zveVirBELA ruzivo rwemagariro rwakange rusipo mune zvimwe zvigadzirwa. Zvinogona kunge zvakangoerekana zvaitika, asi mavhiki mashoma mushure mekunge ndaona mumwe munhu ane Facebook muzita ravo reavatar rinodzungaira kambasi yeruzhinji yeVirBELA, Zuckerberg akazivisa kuti zita reiyo yavo nyowani musangano Mutumwa MAZUVA.
Ipo VirBELA iine munhu-wega mahofisi, nzvimbo hombe dzinonakidza. Iko zvino ine hombe Expo Horo yakavakwa nemabhizimusi ekuratidzira matumba, nzvimbo dzekubuda dzega, nezvimwe.
Nzira yakanakisa yekunzwisisa kuti VirBELA chii uye zvazvinogona kukuitira iwe edza for pachako. Pakati pevatengi base pane ese makuru emasangano anosanganisira epamusoro-tier mayunivhesiti, Fortune 500's, Mom & Pop ad vamiririri, kure kure kwevatengi nzvimbo dzekunamatira, akawanda emakambani ekudzidzisa (sezvo iinewo makirasi), uye vanoshanda / vakagovana mahofisi. Kunyangwe iri VirBELA kana chimwe chigadzirwa chemuchina icho chisati chazoburitswa, ndine chokwadi chekuti 3-D chaiyo nzvimbo ndiyo nzira iyo musangano wekure kure wakananga.
Chirongwa chekubatana cheVirBELA chinobvumidza varidzi veTeam Suite kuti vagamuchire makomisheni pakutengesa kutsva uye inopa coupon rekudzikisira mwedzi wekutanga. Kana uchida tarisa VirBELA, zvizivise iwe uye isu tinokwanisa kusangana zvirinani-zvemunhu pane kambasi.
Tanga paVirBELA mahara
Kuzivisa: Ndiri kushandisa yangu yakabatana link ye VirBELA
Tags: 3 divi3dkushambadzira kwechiitikochiitiko chakakwiridzwaImmersivevirbelamusangano chaiwo
Andrew Angle ndiye muvambi we Nhoroondo ye NetGain Associates, Inc. uye yakanyudzwa mukushambadzira kwedhijitari kubvira pawebhu nyowani. Neshure rekutengesa, akavaka nekuchengetedza mawebhusaiti kumakambani mazhinji kusanganisira asiri-purofiti, kubata zvinhu, zvivakwa, hutano, IT kutsvaga, e-commerce, kufamba wega, uye zvishandiso zvevatengi. Mazhinji mapurojekiti ekushambadzira edhijitari akaparadzira zvikwata zvekuvandudza munyika gumi neshanu. Mantra yake ndeyekuti, "PaInternet, jogirafi haina basa."